Tratry Ny Tsikera ny Media Aostraliana Amin’ny Fanehoana ny Fahalavoan’ilay Tompondaka Olaimpikan’ny Taranja Lomano · Global Voices teny Malagasy
Tratry Ny Tsikera ny Media Aostraliana Amin'ny Fanehoana ny Fahalavoan'ilay Tompondaka Olaimpikan'ny Taranja Lomano
Voadika ny 05 Avrily 2017 2:49 GMT
Hackett (havia) tamin'ny matso fiverenana tany Melbourne ho an'ny Ekipa Olaimpika 2008 – sary nomen'i Sarah Ewart maimaimpoana (Wikipedia CC BY-SA 3.0)
Nahatonga resabe tsy nitsahatra teny anaty media mahazatra sy ny media sosialy ny fahalavoana am-pahibemason’ ilay mpilomano ao Aostralia, Grant Hackett, nahazo medaly volamena tamin'ny lalao Olaimpika. Nahazo tsikera be tokoa ny media Aostraliana noho ny fomba fitondran'izy ireo ny resaka.
Lasa olo-malaza teo amin'ny fanjakana i Grant Hackett hatramin'ireo fandreseny tamin'ny lomano malalaka 1500 metatra, tamin'ny lalao Olaimpika tany Sydney ny taona 2000, ary ireo lalao tany Atena ny taona 2004. Nitàna ireo zavabita tsara indrindra erantany maro izy amin'ny lomano ary nandeha nisotro ronono ny taona 2008. Nanao fiverenana tena nankalazain'ny media be tokoa izy tamn'ireo Fifaninanana Manerantany ny taona 2015 fa tsy voafidy ho ao amin'ny ekipa Olaimpika 2016 kosa.
Fanta-bahoaka efa elaela izay ireo olan'i Hackett amin'ny fanafody, ny fahasalamana ara-tsaina ary ny fianakaviany. Ny resabe farany izao nanomboka tamin'ny fisamborana an'i Hackett ny 15 Febroary, taorian'ireo tabataba tao amin'ny trano nipetrahany niaraka tamin'ireo ray aman-dreniny. Na ny tale jeneralin'ny Fikambanan'ireo Aostraliana Mpilomano sad namana mpiaraka mifaninana milomano aminy, Daniel Kowalski, aza dia namaly mafy tamin'ilay vaovao:
Mila fitiavana be i Grant Hackett amin'izao fisamborana azy izao : Talen'ny Fikambanan'ireo Aostraliana Mpilomano, Daniel Kowalski…
Ireo bitsika sasany kosa manana fitsaràna maherihery kokoa. Ito bitsika ito izao mampitaha an'i Hackett amin'ilay tompondaka teo aloha tamin'ny Liginà Balolina Kitra Aostraliana, Ben Cousins, izay tsy zoviana amin'ny rehetra ireo raharaha rongony naha-voarohirohy azy :
Amin'ny ankapobeny dia i Ben Cousins manao solomaso mainty/mampivanàka i Grant Hackett
Kanefa, mitovy kokoa amin'ny valin'ny media sosialy ny bitsika mahafinaritr'i Collezione Santina:
#GrantHackett, manan-danja be aminay rehetra ianao. Tsaroanay lalandava ny halehibeazanao. Mivoha ho anao daholo ireo varavarana sy tranonay. #aotsaraveianao
Vao maika nanisy menaka teo ambony afo tamin'ilay resadresaka ifanakalozana i Hackett, momba ilay fifandirana niaraka tamin'ny fianakaviany ny volana Janoary, tamin'ny fandraisany anjara am-pahibemaso. Tsy Jessica Dietrich irery no mpanao gazety namerina nandefa ity sary ity izay nalaina avy tao amin'ny kaonty instagram-n'i Hackett.
Grant Hackett: “Maneho hevitra amin'ny media ny rahalahiko… fa misy mahalala t*%&y ve hoe midaroka ahy izy
Efa hitan'ny rehetra intsony izao ilay kaonty.
Lasa fototry ny ankamaroan'ny fanehoankevitra ao amin'ny Aterineto ny asa sy andraikitry ny media, na ny taloha na ny vaovao:
#grantHackett, toetra mahazatra ny media Aostraliana, manome ny ainy mba hampirehareha ireo Aostraliana ny lehilahy, ankehitriny anefa manary ankaratsiana azy izy ireo ary manadrohadro ilay maherifo
Nanana fangatahana mitovy amin'izany koa ireo mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonin'ny fahasalamana ara-tsaina, toa an'i John Mendoza:
Fa misy inona? loham-baovao ao amin'ny @abcnews i Grant Hackett. Avelan'ny media ho irery ny fianakaviana. Resaka fiainana manokana ny #Mentalhealth (fahasalamana ara-tsaina). Fa tsy an'ny daholobe
Ny fihatsaram-belatsihin'ny media…misolo vava manohana ny fahasalamana ara-tsaina sy mampiroborobo ny fampahatsiarovan-tena…kanefa mandetika an'i Grant Hackett eny an-dalambe 😒
Media: Mba eritrereto tsara azafady ny vokatry ny fanehoana foana ny #mentalhealth fahasalamana ara-tsain'ny olo-malaza iray – zava-dehibe ny fahaizana manaja #GrantHackett
Indrisy, mbola mitohy miseho eny amin'ny sehatra ho an'ny daholobe ihany ireo olana manokan'ny fianakaviana. Toa tsy gaga amin'izany i Dave Thomson :
Avelan'ny FFS ho irery ry zareo. Toa hita ho iray amin'ireo olany lehibe indrindra ny olam-pianakavian'i Grant…indrindra ny rahalahiny #CutThemLoose (saraho any ry zareo ireo) #GrantHackett